काठमाडौं छाड्नुकाे कारण अर्कै छ : मणिराज सिंह | Kendrabindu Nepal Online News
काठमाडौं छाड्नुकाे कारण अर्कै छ : मणिराज सिंह
मणिराज सिंह ज्योति साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुन् । विगतमा मासिक रुपमा काठमाडौंमा साहित्यिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका सिंह पछिल्लो समय जन्मथलो महोत्तरीमै क्रियाशिल छन् । संस्थाका स्थापनाकालदेखि नै प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रहेका सिंहको महोत्तरी बसाइँपछि ज्योति साहित्य समाजका गतिविधिहरु ठप्प भएका छन् । किन ज्योति साहित्य समाजका गतिविधि ठप्प भए त ? प्रस्तुत छ केन्द्रविन्दु कर्मी रसिकले कवि सिंह सँग गरेको ५ प्रश्न ।
ज्योति साहित्य प्रतिष्ठान के गरिरहेको छ अहिले ?
– ज्योति साहित्य प्रतिष्ठान वि.स.२०६४ मा काठमाडौंमा स्थापित साहित्यको सेवा गर्न स्थापना भएको संस्था हो । हाल केही समयदेखि निरन्तर कार्यक्रम गर्न केही सकिरहेको छैन ।
प्रतिष्ठान कार्यक्रम किन ठप्प भयो ?
– ज्योति साहित्य प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा हाल निरन्तरता छैन । म हाल महोत्तरी जिल्लाको रामगोपालपुर नगरपालिका अन्तर्गत बसविट्टी गाउँमा व्यस्त हुन परेकोले कायक्रममा निरन्तरता दिन सकिएन ।
काठमाडौंमा रहेर साहित्य सृजनामा रमाइरहेको तपाई काठमाडौंबाट एकाएक हराउनु भयो किन ? साहित्यबाट सन्यास लिन लाग्नु भएको हो की वा अन्य कुनै कारणले ?
– महोत्तरीको रामगोपालपुरमा रहेको उच्च मा.वि. बसविट्टी बसन्तपुरको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएपछि म त्यता व्यस्त हुनु पर्यो । विद्यालयको पठनपाठन स्तरीय गर्न व्यस्त भए । हाल त्यस उच्च मा. वि. मा डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको ३ वर्ष कोर्सको अध्यापन पनि सुरू गर्यो । त्यसकारण काठमाडौंमा नियमित समय दिन नसकेको हो । साहित्यबाट सन्यास लिने भन्ने कुरा हुँँदैन । केही सिर्जना र समयमा अन्तर्वाता त मिडियामा आइरहेको छ । काठमाडौंमा आएको समय कविता वाचन गरेकै छु कार्यक्रमहरूमा । महोत्तरी मेरो जन्मस्थान हो ।
काठमाडौं कर्मभूमी हो । त्यसकारण महोत्तरीको बसविट्टी र काठमाडौं आउनेजाने भइरहन्छ । मेरो लागि साहित्य मुख्य कुरा हो । सात समुद्र पारीका सर्जकहरू त नेपाली साहित्यमा क्रियाशिल छन् भने म त नेपालमै छु । अरु कारण होइन ।
पछिल्लो समय के लेख्दै हुनुहुन्छ ?
– कविता नै लेख्दै छु । २०७७ भित्र एउटा कवितासङग्रह निकाल्न प्रयास गर्दैछु ।
आफुले लेखेको र आफैलाई मन परेको कविता कुन हो ?
– लोकतन्त्रको अस्मिता । यो कविताले देश बोलेको छ ।
देश टोकि खानेहरूले
होश समेत हुने छैन !
शब्दहरू नबुझिने गरी
उचाल्दै आफ्नै खप्पर र नलीहाड
व्युतिनेछन् पुर्खाहरू मशान भत्काउँदै
सूर्य–चन्द्र अङ्कित अटल झण्डामा
खेती गर्न तम्सने छन्
आस्था र विचारको !
एक टुक्रा भोकसित
आँखामा बास माग्दै हिडेका सपनाहरू
तारेर खानेछ नयाँ विहानी
उल्टोबाट कखरा घोकाइनेछ बबुराहरूलाई
पटक–पटक सुत्केरी हुनेछ बैँसालु घाम
घाइते सम्भावना वोकेर
भालेहरु बाँस्दै हिड्नेछन् मध्यान्हमै
Prevअख्तियार र अदालत धाउने समूहका कारण काममा अवरोध : मेयर शाक्य
‘गाँजा पर्यटन’ देखि ‘देशको कायापलट’ सम्मNext